May 2018 - Future Link
LET’S PLAY For Your FUTURE! Yangon
Lets Play For Your Future Mandalay
Film & Video Production အပိုင်း၊ Broadcasting နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Bachelor of Communication
By FutureLink | May 15, 2018 | 0
သတင်းရေးသားခြင်း၊ ကြော်ငြာရိုက်ကူးခြင်း၊ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ရုပ်ရှင် Video ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီမှုအပိုင်းတွင် စိတ်ဝင်စားသူများ၊ Presenter MC ဖြစ်လိုသူများအတွက် Media and Communications ဒီ Media and Communication ဘာသာရပ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ JobsCentral LearningSurvey အရ ကျောင်းပြီးလျှင် အလုပ်အကိုင်ရရှိနှုန်း Top3တွင် ပါဝင်သောကျောင်းတခုဖြစ်သည့် PSB မှာ တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ Diploma in Media and Communications စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သတင်းရေးသားခြင်းပညာ၊ အသံထုတ်လွှင့်မှုနှင့်TV ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုများ စသည် အကြောင်းအရာများကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bachelor of Communication PSB တွင် ဆက်လက်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး Australia နိုင်ငံ The University…
Australia နိုင်ငံရှိ Murdoch University မှ ပေးအပ်မည့် BACHELOR OF BUSINESS program များအကြောင်းနှင့် Scholarship ရနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
By FutureLink | May 11, 2018 | 0
Business ကိုမှ စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Australia နိုင်ငံ၏ Ranking မြင့်သော ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များထဲမှ တခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသည့် Murdoch University မှဘွဲ့ကို Kaplan Higher Education Academy တွင် တက်ရောက်ပြီး ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။ Kaplan Higher Education Academy သည် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Private school များထဲတွင် Top3နေရာရရှိထားသောကျောင်းဖြစ်ပြီး အလုပ်ရ ကျောင်းသားပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် Job Central မှာလည်း No.1 နေရာ၌ ရပ်တည်နိုင်သောကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း 30 ကျော်မှ ကျောင်းသားပေါင်း 30000 ကျော်ကို နှစ်စဉ်လက်ခံ သင်ကြားလျက်ရှိသည့်အပြင် ကျောင်းသားများ တက်ကြွမှု၊ ပျော်ရွင်မှုရစေရန်နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး…
ANIMATOR ဖြစ်ချင်တာ သင့်ရည်မှန်းချက်သာဆို ယခုပဲခြေလှမ်းစတင်လိုက်ပါ
By FutureLink | May 10, 2018 | 0
မိမိစိတ်ကြိုက် Animation လေးတွေ ဖန်တီးချင်သော စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပေမယ့် ဘာကိုစလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ ခက်ခဲနေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ANIMATION DESIGN ကို Raffles တွင် သင်ကြားရင်း ဘွဲ့တခုရသည်အထိ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါရစေ။ Raffles International College ဟာဆိုရင် 1990 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် နိုင်ငံပေါင်း 14 နိုင်ငံ၌ College စုစုပေါင်း 26 ခုကို မြို့တော်24 ခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကာ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ Design နှင့် ပတ်သက်လျှင် Top ဖြစ်သောကျောင်းများထဲတွင်ပါဝင်ပြီး Ranking မြင့်သော ထိပ်တန်းUniversityများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသောCollegeတခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာကျောင်းသား/သူများအနေနှင့် အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးပါက Advanced Diploma in Animation Design (၂)နှစ်…
Cyber Security နှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သတင်းကောင်း
By FutureLink | May 5, 2018 | 0
IT Development, Network & Infrastructure, CyberSecurity & Infocomm Research and Development စသည့်နယ်ပယ်များမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ IT ပညာရှင်များကို လိုအပ်မှုနှုန်းဟာ မြင့်တက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ Cyber Security ကို စိတ်ဝင်စားပြီး IT Specialist တဦးဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိနေရင် သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် Institute တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အဲဒါကတော့ 1956 ခုနှစ်ကတည်းကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Singapore နိုင်ငံရဲ့ Top 10 စာရင်းဝင် Private Institute တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MDIS (Management Development Institute of Singapore)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 2017 မှာ Webometrics Ranking of…
Europe ရဲ့ Tourism အဖြစ်ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ Culinary Arts ကို Professional Certificate ရပြီး လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့Internship အတွေ့အကြုံရမယ်ဆို သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား？
ဒါဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကျောင်းအဖြစ် ခိုင်မာစွာရပ်တည်နေတဲ့ Swiss Education Group (SEG) ထဲက ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်တဲ့ Culinary Arts Academy Switzerland အကြောင်းလေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Culinary Arts Academy Switzerland ကျောင်းဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အချက်အပြုတ်ကျောင်းတွင် ပါဝင်ပြီး University of DERBY, Swiss Hotel School Association (ASEH), EduQua နဲ့ THE-ICE လို့ခေါ်တဲ့ The International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education နဲ့ ပူးပေါင်း ချိတ်ဆက်ထားပြီး Advanced Professional Diploma,…
© Copyright 2018 Future Link Education Provider. All right reserved.